बार्षिक परिक्षामा मात्र धेरै नम्बर किन आउँछ ? | PaniPhoto
बार्षिक परिक्षामा मात्र धेरै नम्बर किन आउँछ ?	दिपध्वनी / April 17, 2012 /5Comments -दुर्गानाथ दाहाल-
ठुला महँगा स्कुल बोर्डिङहरुमा बच्चालाई पढाउँदा राम्रो हुन्छ, गुणस्तरिय पढाइ हुन्छ भन्ने बाबुआमाहरुको सोचाइ गलत रहेछ । त्यति मात्र होइन, आफ्ना छोराछोरीलाई समय दिन सकिएन भनेर होस्टेल, बोर्डसमा राख्ने चलन छ । तर यस्ता कुरामा भर पर्ने हो भने छोराछोरीको पढाइ अन्धकारतिर र आफुले छोराछोरीको भविष्य राम्रो बनाउँन भन्दै खाइनखाइ तिरेको पैसा खोलातिर जान सक्छ । विचार गर्नै पर्छ । मेरो नै अनुभव भन्छु म ।
आफु व्यापारी भएको नाताले छोराछोरीलाई राम्रो निजी स्कुलमा पढाएको थिएँ । बिहान उठेर व्यापार, व्यावसायमा जानु पर्ने र राती पनि कामले नै निकै अबेरमात्रै घर फर्कनु फर्कुन पर्ने बाध्यता थियो । कहिलेकाँही त मलाई आफ्नै छोराछोरीले पनि नचिन्ने हो कि जस्तै लाग्थ्यो । म बिहान निस्कदा छोराछोरी ब्यूझेकै हुन्नन्थे । अनि बेलुका फर्कदा छोराछोरी सुतिसकेका हुन्थे । कहिलेकाही छोराछोरीले दिएको होमवर्क गर्दैनन् भनेर स्कुलबाट फोन आउँथ्यो । तपाईका छोराछोरी पढाइमा कमजोर छन् भन्ने खबर आउँथ्यो । तर अचम्म ! रिजल्टमा भने नम्बर राम्रै नै आएको हुन्थ्यो ।
राम्रो नम्बर आउँनुको पनि कारण बेग्लै रहेछ । मेरा छोराछोरीले पढेर जानेर त्यतिका नम्बर ल्याएका होइनन् रहेछन् । अन्तिम परिक्षामा कम नम्बर दिइयो भने पढाइ राम्रो भएन भनेर स्कुलबाट विद्यार्थी निकाल्ने डरले अन्तिम परिक्षामा चै हुँदै नभएको नम्बर बोकाइएको हुँदोरहेछ । आमाबाबु छोराछोरीको नम्बर देखेर मख्ख परियो तर छोराछोरीको पढाइको स्तर भने चकनाचुर । कक्षा तीनमा पढ्ने छोरोलाई राम्ररी अंग्रेजीको ए बी सी डी पनि लेख्न नआउँने । न त नेपाली अक्षर नै मज्जाले पढ्न जानेको छ ।
लेखे पछि नम्बर आउँछ, खाली छोड्नु भएन ।
छोराछोरीले राम्रो गुणस्तरिय शिक्षा प्राप्त गरुन् भनेर काठमाण्डौको महँगो स्कुलमा भर्ना गरियो । बोडर्स राखियो । हजारौ हजार पैसा तिरियो । तर छोराछोरीको पढाइ जस्ताको तस्तै । केही प्रगती नै भएको छैन । स्कुलमा गुनासो गरेँ, के भएको यस्तो भनेर । त्यतिकैमा एकजना सरले भन्नु भयो, “दाहालजी अहिले नटबोल्ट खोलेका छौ अब कस्न मात्र बाँकी छ ।” उनको कुराले हासो लाग्यो ।
अन्तिम परिक्षामा छोराले ७० प्रतिशत ल्याएर कक्षा ३ बाट ४ मा गयो । नेपालीमा मात्रै ७७ अंक ल्याएको छ । तर छोरोलाई नेपाली अक्षर फुटाउँन पनि आउँदैन । अचम्म लाग्छ । सोच्छु यो मेरो मात्रै समस्या होइन । छोराछोरीको भविष्य भन्दै शिक्षामा लगानी गरिरहेका बाबुआमाको लगानी खेर गए झै भएको छ । शिक्षा क्षेत्र व्यापार मात्रै भएको छ । जबरजस्ती पास गराएर धेरै नम्बरको भारी बोकाएर सिट सुरक्षित राखिन्छ तर विद्यार्थीको जीवन अन्धकारमा गइरहेको सोचिदैन । बाबुआमाले भने हेक्का गर्नुहोस् ।
(नोट : लेखमा प्रयोग भएको तस्विर ब्यंग्यस्वरुप मात्र प्रयोग गरिएको हो ।)
Tags: annual exam high score, how children get high score in final exam? final exam, बार्षिक परिक्षामा मात्र धेरै नम्बर किन आउँछ ? / Posted in: नोट अफ डिसेन्ट
Nitesh Ghimire says: April 18, 2012 at 1:11 am / Reply
दुर्गानाथ दाहालजी तपाइको कुरा निकै राम्रो लाग्यो / तर तपैले नै आफ्नै कुरा याद गर्नु भएन / दुर्गा जी जब तपैका छोराछोरी हेर्ने तपाइलाई फुर्सद हुदैन तपैले अर्काले हेरिदिन्छ भन्ने बिश्वास कसरि गर्नु भएको ? आफ्ना छोराछोरीको सधै तपैले नै हो रखवाली गर्ने /
Bimal BK says: April 18, 2012 at 10:07 pm / Reply
निमेषजी तर teacher हरुको त त्यो जागिर नै हो नि, अनि कसरि तिनलाई विश्वास नगर्नु ? सबैले आफ्नो काम त गर्नु पर्र्यो नि यार.
bina says: April 18, 2012 at 10:46 am / Reply
आफ्नो छोरा छोरीलाई त आफैले समय दिन सक्नु पर्यो नि….अरु को भर मा नपरी आफैले केहि कदम उचाल्नु पर्यो …..समय नदिदा धेरै बिद्यार्थीहरु बिग्रिदो अवस्थामा छ | आजकलका बिद्यार्थीहरु त पढ्न मा जोड दिनु भन्दा चोर्न मा जोड दिरहेको छ | यसले गर्दा नराम्रो प्रभाव परेको छ | तर यस्तो नहोस भनेर बिद्यार्थीहरु लाई गुरुहरुले अलि बढी ध्यान दिदा कसो होला ??
GHANA SHYAM says: April 18, 2012 at 1:05 pm / Reply
जस्तो सुकै प्रतिकुल अवस्था भए पनि शिक्षककै मात्र भरोसामा आफ्नो बिद्यार्थीलाई जिम्मा लगाउनु एकहदसम्म अभिभावकको गलत । हुदै नभाको परिणाम देखावटी बनाएर बालबच्चाको भबिष्य माथि नै खेलवाड हुने गरि स्वार्थी बनेर क्लास चढाउने र फी असुल्ने प्रवृति भएका स्कूल संचालक र शिक्षकको पनि झनै गलत आचरण । तिनीहरुलाई त्यो अधिकार कहाँ बाट मिल्यो त ???? के तिनी हरु ले आफ्नो काम, कर्तब्य र अधिकार लाई तेती सजीलै बिर्सेर तेसरी चल्दा तेस्को मुल्यांकन गर्ने कुनै निकाय हाम्रो नेपाल मा छैन त ? ? कुनै एक बालक लाई राम्रो संग पढाउने चाहनाले उसको अभिभावकले दिन रात मेहनत गर्नु गलत हो ? मेहनत नै नगरे फी तिर्न नसकिने गर्दा बच्चालाई हेर्न नसकिने अनि के गर्नु त ??? अनि बिद्यालय ले के गुणस्तरीय सिक्ष्याका लागि प्रतिस्पर्धा गरेर अघि बढ्नु आबस्यक हैन ? के तेसरी आफ्नो पेशा लाई मजबुत गर्न सकिन्न ?? आखिर पैसा मात्रै कमाउने नियत हो भने शिक्षा क्षेत्र मा किन लागेको त ? अरु कुनै पेशा गरे हुन्न ? मलाई त अभिभावक को भन्दा बढी स्कूल को लापरबाही हो कि जस्तो लग्यो !!
Durga Prasad Pokhrel says: April 18, 2012 at 11:11 pm / Reply
Those marks were given not for the son’s performance in school, but rather to impress parents so as to get fees on time.